आज विहिवार भगवान विष्णुको लागि विशेष दिन यस्ता काम गरे मिल्छ सफलता ! | सुदुरपश्चिम खबर
विहिवार गर्नुपर्ने काम.जुनसुकै कामको दुई पाटो हुन्छ। त्यसैले धार्मिक महत्वका साथ गरिने पूजा आजामा पनि दुई महत्व हुन्छ । त्यसैले गर्न हुने र नहुने विषयलाई ख्याल गर्नुपर्छ । बिहीबार सूर्य उदाउनु भन्दा अघि नै शुद्ध भएर भगवान विष्णुका नाममा गाईको शुद्ध घ्यू हालेर दियो बाल्नु राम्रो हुन्छ । निधारमा केसरी वा बेसारको पहेंलो टिका लगाउँदा राम्रो मानिन्छब्रह्माणलाई कुनै पहेँलो वस्तु दान गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । भगवान शिवका नाममा पहेँलो रंगको लड्डू चडाउँदा पुन्य प्राप्ती हुन्छ । फलफूलमा केरा दान गर्नु राम्रो मानिन्छ ।
विहिवार वर्जित गरिएका काम.धर्मशास्त्र अनुसार, बिहीबार, कपाल नुहाउनु हुँदैन, रौं काट्नु हुँदैन, दारी काट्ने वा नङ काट्नु हुँदैन, त्यस्तै भारी कपडा धुनु पनि हुँदैन । धर्मशास्त्रमा उल्लेख भए अनुसार, बिहीबार कपाल नुहाउँदा पति र सन्तानलाई अशुभ हुने मान्यता छ । रौं काट्दा गुरु ग्रह कमजोर हुने विश्वास गरिन्छ । यसो गर्दा शिरमा असर गर्ने र उमेर समेत कम हुने शास्त्रमा उल्लेख छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ःटिकटक भारतमा प्रतिब न्ध, बलिउड नायिका मलाइका अरोरा खुशी!!टिकटकसहित ५९ वटा चिनियाँ एपलाई भारतमा प्र तिब न्ध लगाइएपछि बलिउड नायिका मलाइका अरोराले खुशी व्यक्त गरेकी छिन् ।उनले आफ्नो इन्स्टाग्राम एकाउन्टमा प्रतिक्रिया जनाउँदै आफूलाई खुशी लागेको बताएकी छिन् । ‘आखिरमा अब हामीलाई हाँसोलाग्दा भिडियो हेर्नुपर्ने छैन’ उनले लेखेकी छिन् ।
मलाइका सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा भने सक्रिय रहन्छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा बो ल्ड तस्वीर शेयर गर्छिन् ।टिकटकमाथि प्र तिब न्ध लाग्दा अन्य केही सेलिब्रेटीले खुशी व्यक्त गरेका छन् । टिकटक स्टार्स भने दुः खी छन् ।
चीन र भारतबीच केही समययता सम्ब न्ध बि ग्रेको छ । भारतीयहरुले भारतमा चिनियाँ सामान बहि ष्कार गर्ने अभियान चलाएका छन् ।भारतले ५९ वटा एपमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले पनि केही भारतीय साइट र समाचार संस्थामा प्रतिबन्ध लगाएको बताएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ःः लुटेरालाई च’क्कु देखाएर धपाएकी नेपाली युवतीको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा चर्चा (भिडियो)!!अस्ट्रेलियाका मिडियामा नेपाली युवती चर्चामा छाएकी छिन्। लु’ट्न आएको लु’टेरालाई च’क्कु देखाएर धपाएपछि उनको सर्वत्र चर्चा भएको हो। न्यु साउथ वेल्सको अबर्नमा रहेको मार्टमा काम गर्दागर्दै लुटेरा मार्टभित्र छिरेर नेपाली युवती पवित्रा कार्कीलाई ड’र देखाउँदै पैसा मागेको थियो।
तर पवित्रा कार्कीले भान्सामा प्रयोग गरिने च’क्कु देखाउँदै लु’टेरालाई नै भगाइदिइन्।स्थानिय मिडियाले उनलाई साहसी युवतीको रुपमा चि’त्रित गर्दै घट’नाको बारेमा समाचार प्रकाशन गरेका छन्। ठ ल्भधक ले बनाएको भिडियो समाचार ः
यो पनि पढ्नुहोस ः टिकटक स्टार रेश्मा घिमिरे र हास्यकलाकार सागर लम्साल ‘तिमी बिजी टिकटकमा’ सार्वजनिक!!नेपालमा पछिल्लो समय छोटो भिडियो साझेदारी साईट टिकटक एकदमै चर्चित छ । यसैबाट लोकप्रियता कमाउनेहरुको पनि कमि छैन भने आम्दानी समेत गरिरहेका छन् । हालै यहि टिकटकको नाम लिएर एउटा म्युजिक भिडियो तयार भएको छ ‘तिमी बिजी टिकटकमा’ ।
जहाँ नेपाली टिकटक स्टारलाई नै फिचर्ड गरिएको छ ।सार्बजनिक गीतमा गायक रबि ओड र सम्झना ओलीको स्वर रहेको छ भने गीतमा संगीत पनि उनै सम्झनाले भरेकी छन् । गीतमा एरेन्ज नरेन्द्र वियोगीको रहेको छ । हेर्नुस् भिडियो यस्तो बनेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ः किन लुकाउन चाहन्छन् क्यमेराबाट अक्षय कुमारले आफ्नी छोरीको अनुहार ? यस्तो छ रहःस्य !! बलिउडमा सुशान्त राजपुतको नि’ पछि परिवारवा’दको वहस सुरु भएको छ । फिल्मी क्षेत्रमा रहेका बुवा’आमाका छोराछोरीले फिल्ममा चर्चा कमाउने तर फरक क्षेत्रवाट आएका कलाकारले अवसर नपाउने भएका कारण सुशान्तले यस्तो निर्णय गरे’को भन्दै वहस सुरु भएको हो ।
उनी आफ्नो छोरा सर्वसा’धारणका छोरा’छोरी जस्तै स्वतन्त्र भएर अध्ययन गरोस्, उसलाई स्टारको छोरी भन्ने अनुभव नहोस् । छोरीको बालापन नखोसियोस् भन्ने कुरामा उनी निकै सम्बे’दन शिल छन् । उनी सर्वसाधारणको बाल’बालिकाले जस्तो जिवन आफ्नो छोरीले पनि साधारण तरिकामै विताओस् भन्ने चाहन्छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस ः नायक प्रदिप खड्काको को‘ना टेस्ट,के आउला रिपोर्ट ?बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेमगीत–३’को मुख्य अभिनेता प्रदीप खड्काले को‘.ना टेस्ट गराएका छन् । निर्माता, निर्देशक सन्तोष सेन र कार्यकारी निर्माता एवं सामाजिक अभियन्ता चक्र बहादुर चन्दसँगै अभिनेता खड्काले कोरो..ना टेस्ट गराएका हुन् ।
कोरो‘ना महामारीको समयमा पनि ‘प्रेमगीत–३’को टिमले को‘ना सं क्र मित विभिन्न क्षेत्रहरुमा सक्रिय रुपमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको यो टिमको बहुप्रतिक्षित फिल्म ‘प्रेमगीत–३’ प्रर्दशनका क्रममा आएर रोकिन पुगेको थियो ।
त्यस्तै, ‘प्रेमगीत–३’को यस समूह अर्को प्रोजेक्टको तयारीमा जुटिरहेको पनि निर्माता(निर्देशक सेनले जानकारी गराएका छन् । ‘प्रेमगीत–३’मा प्रदीप खड्का, क्रिष्टिना गुरुङ, शिव श्रेष्ठ, सुनिल थापा, सन्तोष सेन, माओत्से गुरुङ, मनिष राउत, पुष्कर कार्की, प्रेम पुरी, अनुभव रेग्मी लगायतका कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ ।